National Producer တစ်ဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင် Lee Seung Gi အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
On May 11, 2018 June 4, 2018 By shwe yi
စစ်မှုထမ်းပြီးနောက် အရမ်းကို ခန့်ညားလာတဲ့အပြင် စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း ပထမဉီးဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ‘A Korean Odyssey’ (Hwayugi) လို့လူသိများတဲ့ Drama နဲ့ ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် စွယ်စုံရအနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ “မျောက်”လေးက Idol Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Produce 48’ မှာ National Producer အဖြစ် ပါဝင်ဉီးလာဉီးမှာပါတဲ့နော်။ ပြီးတော့ “ဝက်” လေး Hongki ကလည်း Vocal Trainner အနေနဲ့ ပါဝင်ဉီးမှာပါတဲ့။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်သိထားတဲ့ Lee Seung Gi ကို အဆိုတော်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်မှာ National Producer လုပ်မယ်ဆိုတော့ နဲနဲ ထူးဆန်းနေတယ်ဟုတ်။ ကဲ အဲဒီတော့ Lee Seung Gi ရဲ့ နောက်ကြောင်းကို ပြန်လှန်ကြည့်ကြရအောင်။
Lee Seung Gi ကို ဒီက Drama ပရိသတ်တွေအားလုံးက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လို့ပဲ သိထားကြပေမယ့် တကယ်တော့ Lee Seung Gi က အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် Debut လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် Album ၉ ခုထွက်ရှိခဲ့ပြီး ‘Because You’re My Woman’ နဲ့ ‘Will You Marry Me’ တို့ကတော့ Lee Seung Gi ရဲ့ Hit Song တွေဖြစ်ပါတယ်။ ‘Because You’re My Woman’ သီချင်းကတော့ Korea ရဲ့ ‘မနဲ့မောင်’ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ မပါမဖြစ် သီချင်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲတဲ့နော်။ Lee Seung Gi ရဲ့ ‘Because You’re My Woman’ လေးကို နားထောင်သွားလိုက်ကြပါဉီးနော်။
( မင်မင်က “ Because You’re My Woman” ကိုနားထောင်ဖူးပေမယ့် Cover ပြန်လုပ်ထားတာကိုပဲ နားထောင်ဖူးတာဆိုတော့ Lee Seung Gi ရဲ့ သီချင်းမှန်းမသိဖူး။ နာမည်ကြီးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုတော့ ကြားဖူးနေကြမှာ။ Lee Seung Gi ရဲ့ Original Version လေးကို နားထောင်သွားလိုက်ကြပါဉီး )
Lee Seung Gi ဟာ သူ့ရဲ့ Acting Career ကို ၂၀၀၉ မှာမှ ‘Brilliant Legacy’ Drama နဲ့ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပတမဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ‘Brilliant Legacy’ Drama နဲ့ပဲ 2009 SBS Drama Awards မှာ ‘Excellence in Acting’ award, ‘Top 10 Stars’ award တို့အပြင် ‘Brilliant Legacy’ မှာ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Han Hyo-joo ( W Two world ထဲကမင်းသမီး ) နဲ့ ‘Best Couple’ Award ကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ မင်မင်ကတော့ သူ့ကို ‘My Girlfriend isaNine-Tailed Fox’ မှာ စသိခဲ့တာပါ၊ ‘My Girlfriend isaNine-Tailed Fox’ Drama နဲ့ပဲ 2010 SBS Drama Awards ဆုပေးပွဲမှာ ဒုတိယအကြိမ် ‘Excellence in Acting’ award ကို ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ထူးခြားလှတဲ့ဆုနှစ်ခုပါ။
Lee Seung Gi ရဲ့ Drama တွေကတော့အများကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ‘Gu Family Book’ ထဲမှာတော့ မတူညီတဲ့ Character နှစ်ခုကို သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက သေလောက်ပါတယ်။ Suzy လေးနဲ့ ‘Gu Family Book’ နဲ့ပဲ ‘Best Copule Award’ ကိုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ Drama စုစုပေါင်း ၁၀ ခုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင် ၂ ကားတို့ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Forbes ကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ‘Forbes Korea Power Celebrity’ မှာ နံပါတ် ၁ နေရာကိုရရှိခဲ့တဲ့အြပင် ‘Nation’s Little Brother’ ဆိုပြီး အားလုံးကအချစ်ခံခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မှာ Korea နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့အတိုင်း ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီမှာ စတင်စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ မှာ သူ့ရဲ့ စစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
A post shared by Leeseunggi.official (@leeseunggi.official) on Jan 13, 2018 at 1:19am PST
အဆိုတော်တစ်ပိုင်း သရုပ်ဆောင်တစ်ပိုင်းဆိုတော့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ Music Career life မှာ Album ၉ ခုထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဆုပေါင်း ၂၃ ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့ Acting Career မှာရော Drama Series ၁၀ ခုနဲ့ ရုပ်ရှင် ၂ ကား ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဆုပေါင်း ၂၅ ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဲ.. အဲဒီတော့ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဆုပေါင်း ၅၀ ကျော်ဟာ Lee Seung Gi ကဘယ်လို အနုပညာရှင်မျိုးလဲဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်လေနော့်။
အဲ့ဒါတွေအပြင် Lee Seung Gi မှာ တစ်ခြား Hidden Skill တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Talk Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Strong Heart’ မှာလည်း Host အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး 2009 SBS Entertainment Awards မှာ ‘Best Program”‘ ဆုတွေအပြင် 2010 နဲ့ 2011 SBS Entertainment Awards မှာ နှစ်နှစ်တာအတွင်း အကောင်းဆုံး ‘Top Excellence Host’ ဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ကဲ.. ဒီလိုအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံလွန်းလှတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်က ‘Produce 48’ မှာ National Producer အဖြစ် ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ အံ့သြစရာမလိုတော့ပါဖူးလေနော့်။
‘Produce 48’ ကတော့ Mnet ကနေရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မယ့် Girl Group Reality Show တစ်ခုဖြစ်ပြီး Japan နဲ့ Korea က ပြိုင်ပွဲဝင် ၉၆ ယောက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ Korea ရဲ့ Produce 101 နဲ့ Japan ရဲ့ AKB48 အဖွဲ့တို့ရဲ့ Collaboration ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဆင့် ပထမဦးဆုံး Korea-Japan Girl Group ကို ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Show မှာ Lee Seung Gi က National Producer အဖြစ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး F.T. Island ရဲ့ Main Vocal Lee Hong-gi နဲ့ Sister အဖွဲ့ရဲ့ Soyou တို့က Vocal Trainer အဖြစ်တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rap အပိုင်းကိုတော့ ‘Unpretty Rapstar 2’ က Winner ဖြစ်တဲ့အပြင် ‘Produce 101’ Season2မှာ Rap Trainer အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Rapper Cheetah က ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမှာပါ။ အက Trainer အနေနဲ့ကတော့ ‘Produce 101’ 1&2 က Trainner တွေဖြစ်တဲ့ Choreographers Bae Yoon-jeong နဲ့ Choi Young-joon တို့က ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ.. ဒီလောက်ဆို မျောက်လေးအကြောင်းအပြင် အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ‘Produce 48’ အစီစဉ်လေးကိုပါ သိပြီးသွားကြပြီဆိုတော့ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ‘Produce 48’ အစီအစဉ်ကိုတော့ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်မယ်လို့တော့သိရပါတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ Produce 101 လိုပဲ Online ကနေ Stan ရမှာပဲ။ ‘Produce 48’ မှာ International Fan တွေအတွက် Voting စနစ်လည်းပါဝင်ဉီးမှာဆိုတော့ အဲ့ကျရင် မင်မင်က ဘယ်လို Vote မယ်ဆိုတာပါ အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာမို့ မင်မင်တို့ရဲ့ Page လေးကို မကြာမကြာဝင်ကြည့်ပေးကြပါလို့။
PREVIOUS POST Previous post: Justin Bieber တကယ်ရင့်ကျက်လာနေပြီလား??
NEXT POST Next post: ပရိသတ်တွေအတွက် Justin Bieber ဆီက Message လေး တစ်စောင်